စာမေးပွဲတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း — Steemit
အဆိုပါနောက်ဆုံးစာမေးပွဲလည့်စုံတွဲတစ်တွဲကွာဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာငါကောင်းသောအမှုကိုပြုအရေးကြီးပါသည်။ ဒီတော့အဘို့ငါပြင်ဆင်ထားရန်မူလိမ့်မည်။ တစ်နည်း၌ငါပြင်ဆင်ငါတစ်နှစ်မှတဆင့်သင်ယူအရာကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာငါအမျိုးမျိုးသောဘာသာရပ်များမှစနစ်တကျငါ့အချိန်ကိုဝေနိုင်အောင်လေ့လာမှုတစ်ခုအချိန်စားပွဲပေါ်မှာပြင်ဆင်ထားရန်ရှိသည်။ ငါမှာဒါမကောငျးဖွဈပါ၏အဆိုပါဘာသာရပ်များမှ ပို. အခြိနျမှရကြမည်။
ငါညဦးယံ၌ခုနစ်ခုကနေကိုးနှစ်လေ့လာမှုကာလတစ်နေ့, နေ့လည်မှလေးသုံးခုကနေတဦးတည်းနှင့်အခြားရကြမည်။ ငါသည်ငါ့စိတ်ထဲရှိသမျှအချိန်ကအတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်လေ့လာလို့မရပါဘူး။ ဒါနဲ့ဂိမ်းများနှင့်အပန်းဖြေ၏အခြားပုံစံများအတွက်လုပ်ကြဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရှိရမည်။ ထိုအခါငါသက်တမ်းတိုးသန်စွမ်းနဲ့ငါ့လေ့လာမှုများမှပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
ငါပထဝီဝင်နှင့်သမိုင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောမရဖြစ်၏။ ဒါနဲ့သူတို့နှင့်အတူပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းဖို့ရှိသည်။ အဲဒီနှဈခုဘာသာရပ်များအများအပြားအချက်အလက်များ၏အမှတ်ရစရာလိုအပ်သည်။ ကျွန်မစာဖတ်အများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်အချက်အလက်များသတိရကြောင်းအလို့ငှာ။ သာထို့နောက်အချက်အလက်များငါ့ဦးခေါင်း၌မတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ဂရုတစိုကျစာဖတျဖို့လိုအပျပါသို့မဟုတ်အချက်အလက်များလျင်မြန်စွာမေ့လျော့ခံရဖို့လေ့လိမ့်မယ်။
သည်အခြားဘာသာရပ်များလျော့နည်းအမှတ်ရစရာလိုအပ်သည်။ ဒါနဲ့သူတို့နှငျ့အတူအားလုံးညာဘက်ဖြစ်၏။ ငါသာသူတို့နှင့်အတူထိတွေ့စောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်နှင့်ငါမဆိုပြဿနာမရှိဘဲလွန်သွားသင့်ပါတယ်။
တစ်ခုမှာနောက်ဆုံးအရာလိုအပ်ပေသည်။ ငါ, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ socializing နဲ့တူဒိုးကိုဈေးဝယ်, ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ခြင်းနှင့်-သီချင်းတွေကို pop နားထောင်ရင်းအချိန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုများထွက်ခုတ်ဖြတ်ရန်ရှိသည်မူလိမ့်မည်။ အဆိုပါစာမေးပွဲကျော်ရှိပါတယ်တခါတဖန်ငါသည်ဤအမှုအရာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤအတောအတွင်းက '' အရေးယူဘူတာ '' ပါ! အနိုင်ရခံရဖို့တစ်ဦးသည်စစ်တိုက်ရှိပါသည်။
#preparing #exam #good #luck